National Power News:: एक पटक मात्रै बालदिवस नमनाएर वर्षभरिनै बालदिवश मानाईनुपर्ने : डा. कर्माचार्य National Power News:: एक पटक मात्रै बालदिवस नमनाएर वर्षभरिनै बालदिवश मानाईनुपर्ने : डा. कर्माचार्य
३१ असोज,काठमाण्डौ – शिक्षा र बालबालिकाको अधिकार तथा शैक्षिक उन्नयन सम्बन्धी एक दिने कार्यशाला गोष्ठि भक्तपुरमा सम्पन्न भएको छ । केन्द्रिय बालकल्याण समितिको आयोजनामा, चाणक्य माध्यमिक विद्यालयको सहकार्यमा आयोजना गरिएको उक्त गोष्ठिमा विषेस गरेर बालअधिकारको बारेमा छलफल भएको छ ।
कार्यक्रममा बाल मनोविज्ञ प्रोफेसर डा. उत्तम कृष्ण कर्माचार्यले यस्ता किसमका कार्यक्रमहरुले बालबालिकाहरुलाई उनिहरुको अधिकारका बारेमा जानकारी दिन सहज हुने बताउनुभयो ।
साथै उनिहरुमार्फत अन्य बालबालिका सम्म सुचना तथा जानकारीहरु प्रवाह गर्न सजिलो हने भएकाले पनि, यस्ता कार्यक्रमहरुलाई विभिन्न शैक्षिक संस्थाहरुले समय समयमा आयोजना गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले वर्षदिनमा एक पटक मात्रै बालदिवस नमनाएर वर्षभरिनै बालदिवश मानाईनुपर्ने र बालबालिकाहरुको लागि हरेक दिन बालदिवश बनोस् यस्तो वातावरणको श्रृजना गर्नु आवस्यक रहेको बताउनुभयो।
केन्द्रिय बालकल्याण समिति भक्तपुरका अध्यक्ष द्रोण पोखरेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त कार्यक्तममा प्रोफेसर डा. उत्तम कृष्ण कर्माचार्य, जेष्ठ नागरिक मञ्चका अध्यक्ष राकृष्ण कर्माचार्य ,बाल अभियान्ता कमल सिलवाल, चाणक्य कलेजका अध्यक्ष चन्दनकृष्ण श्रेष्ठ, प्रिन्सीपल गणेश बाबु पोखरेल लगायतका बालबालिकाका क्षेत्रमा कामगर्ने व्यक्तित्वहरुको सहभागीता रहेको थियो । कार्यक्रममा बालबालिका सम्बन्धी कार्यपत्र केन्द्रिय बालकल्यण समिति केन्द्रिय कार्यलयका रवि गौतमले प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।